Mon, Jun 1, 2020 at 8:27pm
काठमाडौँ, २२ असार । चिलीलाई १४ वर्षपछि हराउँदै अर्जेन्टिना कोपा अमेरिका फुटबल प्रतियोगिताको तेस्रो बन्न सफल भएको छ । आइतबार बिहान भएको निकै तनावपूर्ण तेस्रो स्थानको प्लेअफमा अर्जेन्टिनाले चिलीलाई २–१ ले हरायो । खेलको १२औं मिनेटमा मेसी पासमा सर्जियो अगुएरोले गोल गर्दै अर्जेन्टिनालाई अग्रता दिलाए । २२औं मिनेटमा पाउलो डिबालाले गोल गर्दै अर्जेन्टिनाको अग्रता दोब्बर बनाए । ३७औं मिनेटमा मेसी र मेडल दुबैले..
रोहित शर्मा 'धुम' मचाउँदै, विश्वकपमा बनाए ५ शतकको नयाँ रेकर्ड
काठमाडौँ, २१ असार भारतका ओपनर ब्याट्सम्यान रोहित शर्माले विश्वकप क्रिकेटमा नयाँ रेकर्ड बनाएका हुन्। विश्वपमा पाँच शतक बनाएर रोहितले नयाँ रेकर्ड बनाएका हुन्। रोहितले इङ्ल्याण्डमा जारी विश्पकपमा पाँच शतक बनाएका हुन्। शनिबार श्रीलंकाविरुद्ध शतक प्रहार गर्दै रोहितले श्रीलंकाका कुमार सांगाकाराको रेकर्ड तोडेका हुन्। बंलादेशविरुद्धको खेलमा रोहितले सांगाकारासँगको रेकर्डसँग बराबरी गरेका थिए। उनले दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध १२२ रन, पाकिस्तानविरुद्ध १४० रन, इङ्ल्याण्डविरुद्ध १०४ रन बनाएका..
म्याथ्युजको शतकसँगै भारतलाई श्रीलंकाले दियो २ सय ६५ रनको लक्ष्य
एजेन्सी, २१ असार १२ औँ आईसीसी एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा एन्जेलो म्याथ्युजको शतकको मद्दतमा श्रीलंकाले भारतलाई २६५ रनको लक्ष्य दिएको छ। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको श्रीलंकाले निर्धाधिर ५० ओभरमा सात विकेटको क्षतिमा २६४ रन बनाएको हो। श्रीलंकाका लागि एन्जेलो म्याथ्युजले शतक प्रहार गरे। १२८ बलको सामना गरेका उनले १० चौका र दुई छक्काको मद्दतमा ११३ रन जोडे। यस्तै लाहीरु थिरिमन्नेले ५३, धनन्जय डि..
पाकिस्तानको सानदार जित तर दुर्भाग्य सेमिफाइनलमा पुगेन
काठमाडौँ, २१ असार । न्युजिल्यान्ड आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । लर्डस मैदानमा शुक्रबार भएको खेलमा पाकिस्तानले बंगलादेशलाई ९४ रनले हराएपछि न्युजिल्यान्डको सेमिफाइनल यात्रा तय भएको हो । बंगलादेशले लक्ष्य पछ्याउने क्रममा तेस्रो ओभरमा नौ रन कटाएपछि पाकिस्तानको विश्वकप यात्रामा पूर्णविराम लागेको थियो । न्युजिल्यान्डले पाकिस्तानलाई रन रेटमा पछि पार्दै सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको हो । यस खेलसँगै विश्वकपको सेमिफाइनल..
पाकिस्तानका बाबर आजमले रचे इतिहास, ४७४ रन बनाएर कसरी तोडे रेकर्ड ?
२० असार, आहा खबर । इंग्ल्याण्डमा जारी विश्वकप २०१९ अन्र्तगत शुक्रबार बंग्लादेशबिरुद्ध व्याटिंग गर्ने क्रममा पाकिस्तानका बाबर आजमले नयाँ इतिहास रचिदिएका छन् । आफ्नो अन्तिम लिग खेल खेलिरहेको पाकिस्तानी टिमका आक्रामक ब्याट्सम्यान आजमले ९६ रन बनाउँदै शतक बनाउन नसकेपनि आफ्नो नाममा एउटा ठूलो इतिहास भने बनाए । आजमले आफ्नो शानदार पारी खेल्दै यस २०१९ को टूर्नामेण्टमा कुल ४७४ रन बनाए जो पाकिस्तानको..
काठमाडाैं, २० असार । मलेसियामा जारी एसीसी यू-१९ इस्टर्न रिजन क्रिकेट अन्तर्गत समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले सिंगापुरलाई २१७ सय रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेकाे छ । ओपनर रित गौतमको शतक र कुशल मल्लको उत्कृष्ट अलराउण्डर प्रर्दशनसँगै नेपाल सिंगापुरलाई २ सय १७ रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै प्रतियाेगिताकाे सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेकाे हाे । फराकिलो जितसँगै नेपाल समुह ए को विजेता बनेको छ । नेपालले..
काठमाडाैं, २० असार । रित गौतमको शतकसँगै नेपालले सिंगापुरसामु ३ सय २७ रनको ठूलो लक्ष्य प्रस्तुत गरेकाे छ । मलेसियामा जारी एसीसी यू-१९ इस्टर्न रिजन क्रिकेट अन्तर्गत समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले सिंगापुरलाई ३ सय २७ रनको ठूलो लक्ष्य दिएको हाे । क्वालालम्पुरस्थित किनरारा ओभलमा जारी खेलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले ५० ओभर खेल्दै ४ विकेट गुमाएर ३ सय २६ रन बनायो। नेपालका लागि रितले..
लगातार ६ पटकको हारपछि वेष्टइण्डिजले जित्यो, अलआउट हुँदै अफगानिस्तान २३ रनले पराजित
१९ असार । विश्वकप क्रिकेट २०१९ अन्र्तगतको ४२ औं प्रतिश्पर्धामा वेष्टइण्डिजले अफगानिस्तानलाई २३ रनले हराएको छ । खेलमा पहिला ब्याटिंग गरेको वेष्टइण्डिजले ६ विकेटको क्षतीमा ३११ रन जोडेको थियो । जवाफी ब्याटिंग गर्न मैदानमा उत्रिएको अफगानिस्तान २८८ रन जोड्दै अलआउट भएको थियो । वेष्ट इण्डिजका लागि शाई होप, निकोलस पूरन र इविन लेविसले अर्धशतकीय पारी खेल्दै टीमलाई सुरक्षित स्थानमा उभ्याएका थिए । त्यस्तै, अफगानिस्तानका..
मुख्यमन्त्री गुरुङ र कप्तान खड्काद्वारा मैदान निरीक्षण
कास्की, १९ असार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान पारस खड्काले आज पोखरा रङ्गशालामा रहेको क्रिकेट मैदानको निरीक्षण गर्नुभएको छ । पोखरा प्रिमीयर लिग(पीपीएल) को दोस्रो संस्करणको तयारी तथा १३औँ दक्षिण एशियाली खेलकूद (साग) मा क्रिकेट खेलकूद पोखरामा सञ्चालन गर्न सकिने नसकिनेबारे अध्ययनका लागि उहाँहरुसहितको टोली यहाँ आएको हो । प्रदेश सरकारले मैदानमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि आगामी आवमा..
काठमाडौँ, १९ असार मलेसियामा जारी एसीसी यू-१९ इस्टर्न रिजन क्रिकेट अन्तर्गत समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले भोलि (शुक्रबार) सिंगापुरसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । क्वालालम्पुरस्थित किनरारा ओभलमा शुक्रबार बिहान नेपालले सिंगापुरको सामना गर्नेछ । र, सिंगापुरविरुद्ध मैदान उत्रदा नेपाल समूह विजेता बन्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रनेछन् । पहिलो खेलमा चीनलाई १० विकेटले पराजित गर्दै नेपालले सेमिफाइनलमा स्थान पक्का गरिसकेको छ । सिंगापुरविरुद्ध नेपाल समूह विजेता बन्ने..
एसिसी यू–१९ इस्टर्न रिजन क्रिकेट प्रतियोगिताको दोस्रोे खेल नेपालले सिङ्गापुरसँग खेल्ने
काठमाडौँ, १९ असार मलेसियामा जारी एसिसी यू–१९ इस्टर्न रिजन क्रिकेट प्रतियोगिताको दोस्रोे खेल नेपालले सिङ्गापुरसँग खेल्ने भएको छ । क्वालालम्पुरस्थित किनरा ओभल क्रिकेट मैदानमा भोलि हुने उक्त खेल नेपाली समयानुसार बिहान ७ : ४५ बजे प्रारम्भ हुनेछ । नेपाल सिङ्गापुर विरुद्वको खेलमा विजयी हासिल गर्न समूह ‘ए’को विजेता बन्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्ने तयारीमा भने पराजित भए समूहको उपविजेताका रुपमा सेमिफाइनमा रहनेछ ।..
पेरु पनि फाइनलमा, ब्राजिल र पेरुबीच उपाधि भिडन्त
काठमाडौँ, १९ असार । पेरु कोपा अमेरिका फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । उपाधिका लागि ब्राजिल र पेरु भिड्ने भएका छन् । ब्राजिलले बुधबार अर्जेन्टिनालाई २–० ले हराएको थियो भने बिहीबार डेफेन्डिङ च्याम्पियन चिलीलाई ३–० ले हराउँदै पेरुले फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको हो । चिलीलाई पेरुले २ गोल पहिलो हाफमा र थप एक गोल दोस्रो हाफमा गरेको हो । २१ औं मिनेटमा..
न्यूजिल्याण्डलाई १ सय १९ रनले हराउँदै इंग्ल्याण्ड २७ वर्षपछि विश्वकपको सेमिफाइनलमा
असार १८ । विगत ४ वर्ष यता निकै मेहनत गरेको इंग्ल्याण्डको टीमलाई यसपटक होमग्राउण्ड फलिफाप सिद्ध भएको छ । जारी विश्वकपको लीग चरण अन्र्तगत ४१ औं खेलमा आयोजक इंग्ल्याण्डले न्यूजिल्याण्डलाई १ सय १९ रनको फराकिलो अन्तरले हराउँदै इंग्ल्याण्ड २७ वर्षपछि विश्वकपको सेमीफाइनल प्रवेश गरेको हो । कुल ५० ओभर खेल्दै ८ विकेट गुमाएर ३०५ बनाएको इंग्ल्याण्डका बलरहरु खुलेर खेल्दै जाँदा जवाफी ब्याटिंगमा आएको न्यूजिल्याण्ड..
अम्बाती रायडुले लिए सन्यास, बारम्बार वेवास्ता गरिएपछिको 'बोल्ड' निर्णय ?
एजेन्सी, १८ असार भारतीय क्रिकेटर अम्बाती रायडुले क्रिकेटको सबै फरम्याट सन्यासको घोषणा गरेका छन्। उनले बोर्ड अफ क्रिकेट फर कन्ट्रोल इन इन्डिया (बिसिसीआई) लाई एक इमेल लेखेर अप्रत्यासित रुपमा यस्तो घोषणा गरेका हुन्। “२५ बर्ष विभिन्न स्तरको क्रिकेट खेलें। मलाई सहयोग गर्नुहुने घरेलु क्रिकेट बोर्डहरु, आइपिएल टिमहरु र भारतीय क्रिकेट बोर्डलाई धन्यबाद। आफ्नो देशको लागि क्रिकेट खेल्न पाउनु मेरो लागि गर्वको बिषय..
ब्राजिलसँग पराजित भएपछि मेस्सीले भने - रेफ्रीले ब्राजिलकाे समर्थन गरे
काठमाडाैं, १८ असार । अर्जेन्टिनाका स्टार खेलाडी लियोनेल मेस्सीले रेफ्रीकारण अर्जेन्टिना हारेकाे आरोप लगाएका छन्। बुधबार बिहान भएको सेमिफाइनल खेल रेफ्रीले अधिकांश निर्णयहरु ब्राजिलको पक्षमा गरेको आरोप लगाएका हुन् । बुधबार बिहान भएको सेमिफाइनल खेलमा अर्जेन्टिना ब्राजिलसँग २–० ले पराजित हुँदै कोपा अमेरिकाबाट बाहिरिपछि उनले यस्ताे बताएका छन् । बार्सिलोनाका स्टारले खेलमा चम्किन नसक्दा ब्राजिलले ग्याब्रियल जिजस र रोबर्टो फर्मिन्होको गोलको मद्दतले जीत हासिल..
सेमिफाइनल पुग्ने लक्ष्यमा न्युजिल्यान्ड र इङ्ल्यान्ड, दुवै टिम ‘गर या मर’ अवस्थामा
काठमाडौँ, १८ असार । आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा आज (बुधबार) एक खेल हुँदैछ । रिभर साइड क्रिकेट मैदानमा हुने खेलमा दुई बलिया टोली इङ्ल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड भिड्दैछन् । रिभरसाइड ग्राउन्डमा नेपाली समय अनुसार दिउँसो सवा तीन बजे हुने खेलमा घरेलु टोली इंग्ल्याण्डले न्युजिल्याण्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । दुवै टिमको लिग चरणमा यो अन्तिम खेल भएकोले गर या मर को अवस्थामा छन् । सेमिफाइनलमा पुग्न..
यू-१९ एसिया कप छनोट : नेपाल १० विकेटले विजयी
काठमाडौं, १८ असार । मलेसियामा भएको यू-१९ एसिया कप क्रिकेटको छनोट खेलमा नेपालले चीनलाई १० विकेटले हराएको छ । ५४ रनको लक्ष्य नेपालले पाँच ओभरमा नै पूरा गरेको हो । खेलमा टस जितेर फिल्डिङ गरेको नेपालले चीनलाई २३.१ ओभरमा ५३ रन बनाउँदा अल आउट गरेको थियो । जवाफी ब्याटिङमा आएको नेपालका लागि पवन सर्राफले २१ बलमा ४६ रन साथै रित गौतमले १० बलमा..
भारत ७ औं पटक विश्वकपको सेमिफाइनलमा, २८ रनको हारसँगै बंग्लादेश बाहिरियो
असार १८ । क्रिकेट विश्वकपको ४० औं खेल अन्र्तगत मंगलबार अबेर राती बमिंघममा भएको प्रतिश्पर्धामा भारतले बंगलादेशलाई २८ रनले हराएको छ । यस जीत सँगै भारत ८ खेलबाट १३ अंक बटुल्दै विश्वकप २०१९ को सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । भारतको यो ७ औं पटक विश्वकप सेमिफाइनल यात्रा हो । ४८ औं ओभरमा अलआउट भएको बंगलादेशको यात्रा २८६ रनमै सकिएपछि इण्डियाले अतिरिक्त २..
विश्वकप क्रिकेटमा सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडीकाे शीर्ष स्थानमा राेहित शर्मा
काठमाडाैं, १७ असार । जारी विश्वकप क्रिकेटमा सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडीको शीर्ष स्थानमा भारतका रोहित शर्मा उक्लिएका छन्। अस्ट्रेलियाका डेभिड वार्नरलाई पछि पार्दै राेहित शर्मा साे स्थानमा उक्लिएका हुन्। वार्नरले ८ पारिमा ५१६ रन बनाएका छन् भने रोहितले ७ पारीमा ५४४ रन बनाए ।भारत र बंगलादेशबीचको आजको खेलमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको भारतले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ । भारतका लागि ओपनिङ ब्याट्सम्यान रोहित शर्मा र..
आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट : केएल राहुलले बनाए अर्धशतक
काठमाडौं, १७ असार । आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेट अन्तर्गत मंगलबारको बंगलादेश विरुद्धको खेलमा भारतका लागि केएल राहुलले अर्धशतक प्रहार गरेका छन् । भारतीय इनिङको सुरुवात गर्न आएका राहुलले ५७ बलमा अर्धशतक पूरा गरेका हुन् । जारी विश्वकपमा राहुलको यो दोस्रो अर्धशतक हो । उनले पाँच चौका र एक छक्का प्रहार गरे । ..
विश्वकप क्रिकेट : बंगलादेश बिरुद्धको खेलमा भारतले जित निकाल्न सके सेमिफाइनलमा
काठमाडौं, १७ असार । आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा आज (मंगलबार) बलियो मानिएको भारतले बंगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । भारतलाई पराजित गरी विश्वकपको सेमिफाइनलमा पुग्ने सम्भावनालाई कायमै राख्न चाहन्छ । भारत मंगलबार पराजित भए श्रीलंकाविरुद्धको अन्तिम खेल जित्नैपर्ने दबाबमा हुनेछ । अंक तालिकाको दोस्रो स्थानमा रहेको भारतले खेलेका सात खेलमध्ये पाँच खेलमा जित, एक खेलमा हार र एक खेलमा भने वर्षाको कारण अंक बाँड्दै ११..
श्रीलंकाले २८ वर्षपछि विश्वकपमा वेष्ट इण्डिजलाई हार चखायो
१७ असार इंग्ल्याण्डको रिभरसाइड ग्राउण्डमा अबेर राति सम्पन्न विश्वकप अन्र्तगतको ३९ औं खेलमा श्रीलंका २३ रनले विजयी भएको छ । वेष्ट इण्डिजमाथि श्रीलंकाको यो नै १९९२ पछिको जीत हो । जो विश्वकपको इतिहासमा श्रीलंकाले वेष्ट इण्डिजलाई हराएको चौंथो पटक हो । अब आगामी ६ जुलाईमा भारतसँग प्रतिश्पर्धा गर्ने श्रीलंका बंग्लादेशलाई उछिन्दै अंक तालिकाको शीर्ष ६ स्थानमा उक्लिएको छ । खेलमा पहिला ब्याटिंग गरेको श्रीलंकाले ५० ओभर..
विश्वकप क्रिकेटमा अस्ट्रेलियाको सेमिफाइनल यात्रा सुनिश्चित, अन्य टिम दौडमा !
एजेन्सी, १६ असार । विश्वकप क्रिकेटमा आईतबार बेलायत र भारतको म्याच बढी चासो पाकिस्तानलाई थियो । भारतलाई बेलायतले हराएपछि उसको चिन्ता थप बढेको छ । सेमिफाइनलमा चार टोली हुनेछन् । यता, अस्ट्रेलियाले आफ्नो सेमिफाइनल यात्रा पक्का गरिसकेको छ । अब बाँकी तीन टोली कुनकुन होलान् यो प्रतिष्पर्धामा ? यसको स्पष्ट चित्र अझै आउन सकेको छैन । भारत, न्युजिल्यान्ड, बेलायत, बङ्गलादेश र पाकिस्तानमध्ये तीन..
इंग्ल्याण्डले भारतलाई हरायो, रोहित र बेयरस्टोको शतक, कोहलीले बनाए रेकर्ड
असार १५ । बर्मिंघममा भएको विश्वकप क्रिकेटको ३८ औं प्रश्पिर्धामा आयोजक इंग्ल्याण्डले भारतलाई ३१ रनले हराएको छ । जीतका लागि ३३८ रनको लक्ष्यसहित मैदानमा उत्रिएको भारत ५ विकेट गुमाउँदै ३०६ रनमै समेटिएको हो । यस जीतसँगै इंग्ल्याण्डले सेमिफाइनलमा पुग्ने आफ्नो सम्भावनालाई कायमै राखेको छ । त्यस्तै भारत अझैपनि सेमिफाइनलबाट १ नम्बरले टाढा छ । त्यस्तै, यस नतिजाबाट पाकिस्तान भने थप अप्ठेरोमा परेको..
कोहली बने विश्वकपमा लगातार ५ अर्धसतक बनाउने पहिलो कप्तान
काठमाडौं, १५ असार भारतीय कप्तान विराट कोहली एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा लगातार पाँच अर्धसतक बनाउने पहिलो कप्तान बनेका छन् । इंगल्याण्डमा भइरहेको विश्वकपमा कोहलीले लगातार पाँच अर्धसतक बनाउने कीर्तिमान बनाएका हुन् । इंगल्याण्ड विरुद्धको आइतबार रातिको खेलमा कोहलीले ६६ रन बनाए । उनले ओपनिङ ब्याट्सम्यान रोहित शर्मासंग मिलेर दोस्रो विकेटका लागि एक सय ३८ रनको साझेदारी गरेका थिए । उनले यसअघि अष्ट्रेलिया विरुद्ध ८२,..
विश्वकप क्रिकेट: इंग्ल्याण्डले दियाे भारतलाई ३ सय ३८ रनकाे विजय लक्ष्य
एजेन्सी, १५ असार इंग्ल्याण्डमा जारी विश्वकप क्रिकेटमा आयोजक इंग्ल्याण्डले भारतलाई ३३८ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । बर्मिङ्घममा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको इंग्ल्याण्डले शानदार ब्याटिङ गर्ने क्रममा ७ विकेटको क्षतिमा ३३७ रन बनायो । जोनी बेयरस्ट्र र जासन रोयले पहिलो विकेटका लागि २२ ओभर १ बलमै १६० रनको उत्कृष्ट साझेदारी गरेका थिए । बेयरस्ट्रले १०९ बलमा १११ तथा रोयले ५७ बलमा..
विश्वकप क्रिकेटमा विजय शंकरलाई रिप्लेस गर्दै इंग्ल्याण्डविरुद्ध रिसव पन्तको डेब्यू
काठमाडाैं, १५ असार । आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा भारतीय टोलीबाट युवा ब्याट्सम्यान रिसव पन्तले डेब्यु गरेका छन्। घरेलु टोली इंग्ल्याण्डविरुद्धको खेलमा भारतीय टोलीले रिसवलाई स्थान दिएको हो । ब्याट्सम्यान विजय शंकरको स्थानमा पन्तले मैदान प्रवेश पाएका हुन् । इंग्ल्याण्डले भारतविरुद्ध टस जितेर ब्याटिङ रोजेको छ । बर्मिंघमस्थित क्रिकेट मैदानमा शूरु भएको खेलमा टस हारेको भारत घरेलु टोलीविरुद्ध फिल्डिङको निम्तो पाएको छ । आजको खेलमा भारत..
आईसीसी टी-ट्वान्टी एसिया फाइनल छनाैटका लागि नेपाली क्रिकेट टोलीको घोषणा [नामसहित]
काठमाडौँ, १५ असार आइतबार १८ सदस्यीय नेपाली राष्ट्रिय टोलीको घोषणा भएको छ । आईसीसी टी-ट्वान्टी एसिया फाइनल क्वालिफायरका लागि नेपाली टोलीको घोषणा भएको हो । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा १८ सदस्यीय नेपाली राष्ट्रिय टोलीको घोषणा भएको हो । १४ नियमित र ४ वैकल्पिक खेलाडी छनौट भएका छन् । टोलीमा परेका यी खेलाडीहरु : १. पारस खड्का कप्तान २. ज्ञानेन्द्र मल्ला उपकप्तान ३. शरद भेषवाकर ४. बसन्त रेग्मी ५. विनोद..
विश्वकप क्रिकेटको रोमाञ्चक खेलमा पाकिस्तान ३ विकेटले विजयी, अफगानिस्तानको उत्कृष्ट प्रदर्शन
काठमाडौँ, १४ असार । जारी विश्वकप क्रिकेट अन्र्तगतको ३६ औं लीग खेलमा अफगानिस्तालाई पाकिस्तानले ३ विकेटले हराएको छ । खेलमा पहिला ब्याटिंग गरेको अफगानिस्तानले ९ विकेटको क्षतिमा २२७ रन बनाएको थियो । जवाफी ब्याटिंगमा आएको पाकिस्तानले ७ विकेटको क्षतीमा ४९ दशमलव ४ ओभर खेल्दै २३० रन बनाएपछि उसको विश्व कप सेमिफाइनल यात्रा कायमै रहेको हो । शनिबार राती भएको निकै नै रोमाञ्चक खेलमा..
अर्जेन्टिना सेमिफाइनलमा, फाइनल पुग्न ब्राजिलसँग भिड्ने
काठमाडौँ, १४ असार । अर्जेन्टिना ब्राजिलमा जारी कोपा अमेरिका फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा पुगेको छ । शनिबार बिहान भएको क्वाटर फाइनलमा भेनेजुएलालाई २–० ले पराजित गर्दै अर्जेन्टिना सेमिफाइनलमा पुगेको हो । खेलको १०औं मिनेटमा लौतारो मार्टिनेजले गोल गर्दै अर्जेन्टिनालाई अग्रता दिलाएका थिए । ७४औँ मिनेटमा जिओभानी लो केल्सोले गोल गरी अग्रता दोब्बर बनाए । दुवै गोलका लागि सर्जियो अग्युरोले पास उपलब्ध गराएका थिए..
Results 1917: You are at page 20 of 64